कथा- जुना क्रमश: ६ – Pundary Aryal :: Nepali Literature Portal
बुढा जिम्माल धेरै जसो बिमारी भइराख्ने हुनाले टुहुरा नातिहरुको एक्कै चोटी बिहे गर्न पाए हुन्थ्यो । भनेर छोरालाई भनिराखेका थिए । नातिहरु दश पुगेर एघार टेकेका मात्रै के थिए । समाजमा बालबिहेको चलन नै थियो । केटा केटिको सानै उमेरमा बिहे गरिदिने चलन, बरु बिहे गरेपछि माइतीमै छोडेर आउने चलन हुन्थ्यो । सायद समाजमा केटिको संख्या कम हुने हुनाले होला । बिहे गरेर केटीलाई आफ्नो बनाइ राख्नकै लागि हो कि ? चक्रपाणीले पनि बुवाको इच्छा अनुसारनै नै आफ्ना छोरा पदम र दुर्गालाइ एकै पटक बिहेको लग्न जुराएर बिहे गरिदिए ।
बिहेवारिको सबै काम सकिएपछि दुवै बुहारिहरुलाई माइती पठाइयो । बुढा जिम्माल भक्तिराम बिमारी हुदै गएका थिए । दुवै छोराहरुलाई पढाउन संस्कृत बिद्यालय, बनारस पठाइयो । भक्तिराम दिन प्रतिदिन कम्जोर हुदै गैराखेको हुनाले सुधार हुने कुनै छाँट थिएन । वास्तवमा भन्ने हो भने बुढेस उमेर नै रोग हो त्यो निको हुने सम्भावना पनी हुदैन । बुढा जिम्माल आफैले बिचार गरि घाटे बैधलाई बोलाउन पठाए । भनिन्छ, धर्मात्मा मान्छेहरुले आफु कहिले मरिन्छ भन्ने कुरा पनि जान्दछ ! त्यस्तै जिम्माल भक्तिरामलाई पनी आफ्नो मृत्यु नजिक आएको आभाष भएको हुनु पर्छ । नभन्दै घाटे बैद्यले गंगामा गइ अर्धजलमा समाधी लगाउन सल्लाह दिए ।
गंगामा अर्धजल लैजान एक्लो चक्रपानिले मात्रै निर्णय गर्न सक्दैनथे । उनले जिम्माल दाजु लक्ष्मीभक्त बोलाएर बुवाको इच्छा यस्तो छ, ल अब कसरी ब्यबस्था गरौ भनि सल्लाह मागे । लक्ष्मीभक्तले आफ्ना बावुलाई फेरी सोधे : गङ्गा घाटमा यसरी मृत्यु कुरेर बस्नु के उपयुक्त होला र बुवा हजुर ? भन्दै सोधे पनी बुढा जिम्मालले मेरो अन्तिम इच्छा हो । ल यसको ब्यबस्था गर भने उनले लेकिन तर अरु तर्क नै सुन्न चाहेनन् । लक्ष्मीभक्त बुवाको चित्त दुखाउन चाहन्नथे । गाउलेहरु पनि भजन किर्तन गर्दै बुढा जिम्माललाइ अन्तिम बिदाइ भनि डोलीमा राखी फूलमाला बाजा गाजा सहित रुद्रबेनी गङ्गा घाटमा पुर्याउन आउछन । सबै गाउले बुढाको आशिर्बाद लिएर फर्कछन ।
रुद्रबेनीको घाटमा बुढा जिम्माललाइ स्नान गराएर सन्ध्या गराउन लगाए पछि जिम्माल लक्ष्मीभक्तका सबै भाइ जम्मा भएर नजिकैको मन्दिर आडमा रहेको पाटीमा बस्ने ब्यबस्था मिलाउछन । राति मन्दिरमा आरती पुजा सकाएर पाटीमा सबैसंग बुढा जिम्मालले छोराहरुलाई अर्ति उपदेश दिन थाले ।” एक मतो मिलेर बसयौ भने कसैले तिमीहरुलाई हेप्न सक्दैन । समाजमा सक्दो सहयोग भलो गरेर सबैको मान्य हुन् सुखद हुन्छ ! म जिम्माल हुँ भनेर थिचोमिचो गरे असन्तोष बढेर जान्छ र कालान्तरमा आफुलाई हानी गर्दछ ।”
यस्तै प्रकारले छ दिन गंगामा स्नान पुजा आज्ञा गरेर पाटीमा फर्के । साँझ बुढा जिम्मालले भोलि मेरो अन्तिम दिन हो भन्दै बिहानै सबै छोराहरु तयार हौ र तिमीहरुले सबै मिलेर भागवत पाठ सुनाउ भने । सबै बिहानै उठे, बुढालाइ कान्छा छोरा चक्रपानिले पिठ्युमा बोकेर रुद्रवेनी किनार घाटमा पुर्याए । स्नान गराई गंगाको पुजा गराएर, बुढा जिम्मालको खुट्टा गंगाजिमा डुबाई सबै वरिपरि बसेर भागवत पाठ गर्न लागे । जिम्माल बुढालाई भागवतगीता कन्ठै थियो । उनले भागवतगीता पाठ सक्याएर गंगाको जल हातमा लिएर हे कृष्ण अब मलाइ तपाइको शरणमा लिनुस । भनेर ढोगे पछि बुढा जिम्मालको आफ्नो प्राण गयो । छोराहरुको भागवत पाठ पनि संगै सकियो ।सबै मिलेर बुवालाई उठाउन खोजे तर बुढा जिम्मालले प्राण छोडिसकेका थिए ।